50 qof oo ku dhintay qarax is-miidaamin ah oo salaadii Jimce lagu qaaday Masjid - Caasimada Online
Home Warar 50 qof oo ku dhintay qarax is-miidaamin ah oo salaadii Jimce lagu...
50 qof oo ku dhintay qarax is-miidaamin ah oo salaadii Jimce lagu qaaday Masjid
Kunduz (Caasimada Online) – Qarax is-miidaamin ah ayaa burburiyey Masjid ku yaalla gobolka waqooyiga bari ee Afghanistan ee Kunduz maanta, halkaasi oo ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof.
Muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujiyey meydad ku hoos jiray burburka Masjidka, oo ay ku cibaadeystaan dad kasoo jeeda qowmiyad laga tiro badan yahay oo Shiico ah.
“Warbixino horudhac ah ayaa muujinaya in inka badan 100 qof lagu dilay laguna dhaawacay qaraxa,” waxaa sidaas qoraal uu soo dhigay twitter ku yiri howlgalka QM ee Afghanistan.
Sarkaal u hadlay kooxda Taalibaan oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen weerarka.
Ma jirto cid weli sheegatay mas’uuliyadda. Qaraxa ayaa xigay weeraro dhowr ah, oo uu ku jiro mid lagu qaaday Masjid ku yaalla Kabul, oo dhacay toddobaadyadii tagay, kuwaas oo qaar ka mid ah ay sheegatay kooxda Daacish.
Weeraradan ayaa hoosta ka xariiqaya caqabadaha amni ee ay wajaheyso kooxda Taalibaan, oo bishii August la wareegtay gacan ku heynta Afghanistan, wixii markaas ka dambeeyeyna billowday howlgallo ka dhan ah unugyada Daacish ee Kabul.
Dadka degan magaalada Kunduz, oo ah caasimadda gobolka isla magacaas wata ee Kunduz, ayaa AFP u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu guda jiray salaadda Jimcaha.
Kunduz ayaa ku taalla bar la isaga gudbo oo muhiim u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga Afghanistan kala dhaxeeya dalka Tajikistan.
Dadka Shiicada ayaa ah 20 boqolkiiba shacabka Afghanistan. Badankood waxay kasoo jeedaa Hazara, oo ah qowmiyad tobaneeyo sano lagu dhibaateenayey Afghanistan.